ikhaya » uthanda & Activators » Vuka wengcwaba Raider Crack for PC
Vuka wengcwaba Raider Crack for PC
by Emily Kenzie | EtiMnga 12, 2016
Ukuvela wengcwaba Raider Crack for PC isenzo kunye twist lomngeni game yokuzonwabisa. Ngayo ibali yomdlalo hlobo Lara Croft njengoko amashishini eSiberia bekhangela kwisixeko abadumileyo of Kitezh. Owayegula uluntu eyayimiwe ejolise wayibetha kwisithembiso sixeko ukungafi. Umdlalo lujolise kakhulu ukuphila kunye ukulwa. Ngaphezu koko, kananjalo umdlali uya kuphonononga yan- ezahlukeneyo optional tombs.Camilla Luddington liphuma umva ilizwi andilungisele nendima yakhe njenge Lara. Abadlali kufuneka ukulawula Lara ngokusebenzisa kwiimeko ezahlukeneyo ezifana belinye sisilwa, kwaye awugqibe amacandelo iqonga puzzle. Usebenzisa elektroniki ezahlukeneyo phambili uhambe ngayo ibali. koko, Lara sikwazi ukufunxa bume kuhle emdlalweni. Yena isenokuzifihla elinamatyholo okanye imithi. Okuninzi umdla kwenziwe Molotov neecocktails kunye neziqhushumbisi bokushicilela, kuxuna iintolo ezinto ukumphazamisa iintshaba.
Camilla Luddington liphuma umva ilizwi, andilungisele nendima yakhe njenge Lara. Abadlali kufuneka ukulawula Lara ngokusebenzisa kwiimeko ezahlukeneyo ezifana belinye sisilwa, nawokugqiba amacandelo iqonga puzzle. Usebenzisa elektroniki ezahlukeneyo phambili uhambe ngayo ibali. koko, Lara sikwazi ukufunxa bume kuhle emdlalweni. Yena isenokuzifihla elinamatyholo okanye imithi. Okuninzi umdla kwenziwe Molotov neecocktails kunye neziqhushumbisi bokushicilela, kuxuna iintolo ezinto ukumphazamisa enemies.Additionally, Lara unamandla ezinzi sikhuselekile kwaye kwakhona ukuphepha ukulwa ngokupheleleyo ngokuthi kokonyuka imithi. zingenziwa iindidi ezahlukeneyo izaphetha ukusebenzisa izilwanyana ezithile kunye nezinto apho Lara ingela kwaye lomanakalo. ngompu Lara ngayo, zokutyhomfa ndinyuke ngompu, ukubetha umpu ngamnye lunee zabo ngezenzo. izinto ezintsha ngokuvela Engcwabeni Raider Crack game ziquka imela ekuzingeleni melee okanye Sasizimela kuhlaselo. Ukuphinda-wokujija kwakhona kongezwa ngenxa yokuhlola phantsi, kwaye yokothula lock ukuvula iibhokisi itshixiwe doors.Platforming ubuchwephetshe nazo njengenxalenye ebingalingi kufana nokutsiba phambili eludongeni nkqo kunye lokuqubha. Lura ungenza uxhumayo ukusuka kongqameko ukuba kongqameko ngokunjalo wakhuph phezu ekujingi.
Ukongezelela, Lara unamandla ezinzi sikhuselekile kwaye kwakhona ukuphepha ukulwa ngokupheleleyo ngokuthi kokonyuka imithi. zingenziwa iindidi ezahlukeneyo izaphetha ukusebenzisa izilwanyana ezithile kunye nezinto apho Lara ingela kwaye lomanakalo. ngompu Lara ngayo, zokutyhomfa ndinyuke ngompu, ukubetha umpu ngamnye lunee zabo ngezenzo. izinto ezintsha emdlalweni iquka imela ekuzingeleni melee okanye Sasizimela kuhlaselo. Ukuphinda-wokujija kwakhona kongezwa ngenxa yokuhlola phantsi, kwaye yokothula lock ukuvula iibhokisi itshixiwe doors.Platforming ubuchwephetshe nazo njengenxalenye ebingalingi kufana nokutsiba phambili eludongeni nkqo kunye lokuqubha. Lura ungenza uxhumayo ukusuka kongqameko ukuba kongqameko ngokunjalo wakhuph phezu ekujingi. The rise of the tomb raider PC crack solves your problems. Here are some features of rise of tomb raider crack.
Vuka wengcwaba Raider kukubetha Game Ingaba Iimpawu Efana
Abadlali uyakwazi ukwenza izinto ezifana iintlobo utolo ezahlukeneyo (ityhefu, edutyulwa ngompu, intambo, climbable, umlilo) emdlalweni lowo bume ngqwabalala bagqogqa izinto kwizityalo nezilwanyana.
Zombini abalinganiswa ngabantu isilwanyana kusabela umjikelo imini-ubusuku.
Umzekelo, ukuba lixesha ebusika Lara kufuneka kuzingela yingcuka edulusele ngaphandle kuphela ngexesha elithile losuku ukudala idyasi ezomeleleyo yasebusika
Lara Ungaqubha leyo eya kongeza yokulwa kwakhe amaqhinga.
Ngaba kwenza dodging ukuphepha zokufa emdlalweni kwaye enze kokugqiba ayihlasele zokubala.
Ku echulumancisayo yaye kulula ukudlala lo mdlalo kunye oshukunyiswa agudileyo iinketho.
Beautiful ubuhle kunye neendawo ezintle, izimvo ntaba, etc. anike umdlali ukuva yonke kwenzeka lokwenyani. Yenza umdlali luxakeke kuyo.
Kusetyenziswa kwanjani & Sihlwahlwaz Rise of Engcwabeni Raider
Ngoku Umxokozelo umdlalo ukusuka iqhosha kunikwa
Tshintsha ifayile kwithanda kwisilawuli umdlalo
← Ukuqhubela Mod seNokia v1.9 Minecraft Crack WiFi Hacker APK 2017 →